HTC 10 ga-enwe Android Nougat n'izu atọ na-abịa. | Gam akporosis
Ọ bụghị mmelite Nougat niile ka a na-ewepụta ọfụma na nwayọ. Ọbụna na Nexus n'onwe ha, ọbụlagodi na Nexus 6P, kpatara nsogbu ụfọdụ nke ahụ dugara oge igbu oge ya ruo mgbe nnukwu G kụrụ nsogbu ahụ mere na Nexus nke Huawei rụpụtara; ọnụ nke bara uru dị ukwuu nke jiri oge na-aga kpọrọ ihe karịa.
The HTC 10 bụ kama a ọnụ na-arahụ fọrọ nke nta ka ahụghị ọha mmadụ, ọ bụ ezie na ọ na-nyere ụfọdụ e ji mara na-eme ka ọ mgbe niile a oké zuo ka onye ọrụ chọrọ ezigbo ọnụ. A hụkwara nke a na nsogbu nke ichere iji malite mmelite ahụ na Nougat n'ihi ụfọdụ chinchi ahụrụ. Amabeghị ya mgbe mmelite ahụ ga-ebipụta ya, mana ugbu a anyị maara nke ọma n'ihi ozi ọhụrụ.
News leaker @LabTooFeR ekwuola na nwelite na Nougat ga-abụ n'izu atọ na-abịa na-eche HTC ka ọ pụta ìhè na nkwenye gọọmentị.
HTC 10 (EU + ụgbọelu nsụgharị) iji nweta Android N na Jenụwarị nche patch n'ime izu 3 na-esote. Zuo ike ma chere.
- Chukwuemeka (@Nkechiagha) January 14, 2017
Nkwupụta a ka emere site na tweet, nke a na-ekwu na mmelite ugbu a ga-agụnye gam akporo nche patch maka ọnwa nke Jenụwarị. Ọ bụ na otu tweet ebe a na-adụ ndị ọrụ HTC 10 ọdụ ka ha zuru ike ma chere maka mmelite ahụ nke na-ekwesịghị iwe ogologo oge, ebe ọ bụ na ụbọchị ndị na-esote n'ime izu 3 ahụ enwere ike itinye ya.
Ọ bụ ezie na site na ozi ahụ na Twitter ọ mere ka o doo anya na izu atọ a bụ naanị maka nkeji na Europe ekwentị, ọ bụ ezie na ịnwere ike ịtụ anya na ọ ga-ada n'otu oge maka mpaghara ndị ọzọ. Mmelite na Nougat nke na-ewe oge maka ọtụtụ ọnụ, ọ bụ ezie ndị ahụ kpọghere akpọchielarị nweta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Android Nougat ga-ebido ịgbanye na HTC 10 na izu 3 na-esote
Samsung Onye isi oche Samsung nwere ike ijide na South Korea
ZTE mepee mmemme gam akporo Nougat beta na ZMax Pro